“Benzema wuxuu noo suurtogalin doonaa ku guuleysiga koobka EURO 2020” – Halyeey reer France ah - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 11, 2021 at 09:02 “Benzema wuxuu noo suurtogalin doonaa ku guuleysiga koobka EURO 2020” – Halyeey reer France ah2021-06-11T09:02:13+02:00 CAYAARAHA
(Yurub) 11 Juun 2021. Xulka qaranka France oo ku soo guuleystay koobkii adduunka ee 2018 ayaa wuxuu qeyb ka yahay Koobka Qaramada Yurub ee EURO 2020 Group ay kula mideysan yihiin xulalka Germany, Portugal, iyo sidoo kale Hungary.
Halyeeyga xulka qaranka Faransiiska ee William Gallas ayaa xaqiijiyay in soo laabashada Karim Benzema ay noqon doonto mid si weyn uga caawin doonta Koobka Qaramada Yurub ee EURO 2020.
William Gallas oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay dib ugu soo laabashada Benzema ee xulka qaranka France, wuxuuna yiri:
“Waxaan heysanaa fursad weyn oo aan koobka kor ugu qaadi karno, waxaan heysanaa kooxdii ugu xoogga badneyd tartanka.”
“Ku guuleysiga Koobka Adduunka ayaa hubaal ka caawin doonta kooxda ku guuleysiga Euro.”
“Markaad ku guuleysato Koobka Adduunka, waxaad inta ugu badan ku guuleysataa Koobka Qaramada Yurub, Waxaan sameynay taas 1998, halkaasoo aan ku guuleysanay Koobka Adduunka iyo Euro labo sano ka dib, Spain ayaa sidaas oo kale sameysay.”
“Qof walba wuu ogyahay in Karim Benzema uu ka mid yahay weeraryahanada aduunka ugu fiican, wuxuuna soo qaatay xili ciyaareed aad u fiican.”
“Tartamayaashu waxay ka baqayaan inay la ciyaaraan Kylian Mbappé iyo Karim Benzema, waxay leeyihiin awood badan oo ay ku wada ciyaari karaan, waan hubaa inay goolal dhalin doonaan, runtii ma jecleysan laheyn inaan ka hor imaado iyaga.”
« Maleeshiyaadka macawiisleyda oo weerar ku qaaday saldhig Boolis
Maguire oo la shaaciyay xilliga uu garoomada dib ugu soo laaban doono… (Miyuu ka qeyb gali doonaa tartanka EURO 2020?) »